Twitter bụ Nchọgharị Ọhụrụ M | Martech Zone
Twitter bụ Nchọgharị Ọhụrụ M
Saturday, March 15, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ana m eso ugbu a Ndị 341 na Twitter. M kpọtụụrụ Twitter wee gwa ha ka ha nwee ike 'ịgbaso'. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ị soro m, m na-eso gị na-akpaghị aka. Ọ bụghị atụmatụ ederede ma ọ bụ na ọ dị na njirimara onye ọrụ… mana onye gwara m banyere ya, ya mere m rịọrọ ya na Twitter jiri obi ụtọ mee ka ọ nwee.
Enwere ọtụtụ mkparịta ụka na weebụ banyere Twitter na nke ahụ nwere ike ma ọ bụ nwere ike ọ bụghị be a n'efu of oge.
Dika ngwa oru nkwukọrịta ohuru na teknụzụ pụtara site na web enwere mgbanwe na ojiji ha, ikekwe, ndị okike atụghị anya ya. Naanị taa ka m matara etu m si eji Twitter eme ihe dị ka Igwe Nchọgharị, yana otu ndị ọzọ si eji m. Odi m ka Twitter nwere ike mechaa wepu oke onu ogugu na teknụzụ ndi ozo - ikekwe ihe omuma mpaghara bu ChaCha, engine nyocha nke ụbụrụ na-arụ.
ChaCha anabataghị mgbe niile na kasị mma pịa - na emeela m n’eziokwu ịghọta ihe azụmahịa ahụ bụ maka ya. Backmụ mmadụ na-akwado ọchụchọ na-adị ka anaghị arụ ọrụ. Ma ikekwe ọ bụ… ma ọ bụrụ na ị na ụlọ ọrụ na ọ bụghị obodo.
Nke ahụ kwuru, uru Twitter dị ka igwe nyocha dị ịtụnanya. Mụ na ndị ọkachamara azụmaahịa, ndị enyi na ndị ọrụ ibe m gbara m gburugburu nke na-atọ m ụtọ ịkọrọ ma mụta ihe na ya. M na-asọpụrụ ha onwe ha, ha abụghị ndị bịara abịa na njedebe nke weebụ. Ma dịka ọnụọgụ ndị m bidoro iso na-abawanye - ya mere ogo na oke nzaghachi m natara mgbe m debere ajụjụ.
Mgbe m jụrụ banyere ihe nchịkọta akụkọ foto ntanetị, ndị folks abụọ zara ya ozugbo Abiary. Mgbe m juru ka a Slideshare ọzọ (ha alaala ọtụtụ n'oge na-adịbeghị anya), enwetara m ihe na-erughị azịza iri na abụọ. NA, M nwere ike zaghachi na 'ezi-na-akụ' m ajụjụ n'ezie na-achọta ihe ngwọta ziri ezi. Na TwitterEnwere m ike nụchaa ọchụchọ m, nweta echiche na aro ozugbo m nwere ike ịpị nsonaazụ ole na ole Google.
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị ịgbaso ọtụtụ na Twitter, ikekwe ị nwere ike iche banyere ya n'echiche dị iche. Twitter bụ Igwe Ọchụchọ M ọhụrụ m.
Tags: Chọọ MarketingTwitternyocha twitter
Ọ bụghị ka ọ dị ka ee-nwoke, mana m kwenyere n'okwu ọ bụla. Twitter abụrụla ọmarịcha maka inye aka ịchọta ozi. Ndị nọ n'ebe ahụ dị oke egwu.
Doug, mgbe m gụchara akwụkwọ ozi gị, agara m ịdebanye aha. Agbanyeghị, mmadụ ejirila aha njirimara m, yabụ m ga-agbanwe ya. Naanị nsogbu bụ na amabeghị m ka m ga-esi bụrụ onye na-eso ụzọ ma ọ bụ ka esi eso mmadụ. Aha njirimara m bụ dratanone. Biko ị nwere ike itinye m na ndepụta ndị na-eso ụzọ gị? Daalụ, Doug.
M lere anya na m na-eso gị ka ọ dị ka ị chọpụtala ya!
Cheers & hụ gị na Twitter!
Nnukwu post Doug na m kwenyere - ọ nwere ike ịbụ ezigbo akụ! M ga-agbakwunye gị ugbu a!
Ị nwere ike iji ChaCha ugbu a site na Twitter. Gaa na http://www.twitter.com/ChaCha ma soro twitter. Mgbe ahụ ọ bụrụ na ịmee ozi ozugbo (d ChaCha) na ajụjụ, ị ga-eji azịza gị nwetaghachi ozi ozugbo. Ha etinyela ọrụ azịza ederede 242242 ha na Twitter.
M maa otu ụzọ… Ma eleghị anya, Social Search re. Twitter ga-anọchi SEO… Nke ahụ ga-abụ my nnwale – nwaa ịchọ blọgụ m 😛
Naanị taa ka m malitere iji Twitter. Obere oge na bandwagon, mana enwere m ike ịhụ ihe kpatara ndị ọzọ ji hụ na ọ bara uru.
Enwere m olileanya na ị dị mma, Doug.
Douglas- Abụ m nnukwu onye ofufe twitter. Ọ na-enyere gị aka ịkparịta ụka na obere snippets bụ isi ihe ị na-eche ma ọ bụ na-ekerịta. gbakwunyere Twitter juputara na ndị na-eme ihe n'oge na ndị na-anụ ọkụ n'obi webụ. Anụbeghị m gbasara iso-eso akpaaka, mana ọ mara mma nke ukwuu! Daalụ maka ịkekọrịta nke ahụ.